युगसम्बाद साप्ताहिक - मेडिकल काउन्सिलको पीक्षामा २९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
Friday, 12.13.2019, 12:24am (GMT+5.5) Home Contact
मेडिकल काउन्सिलको पीक्षामा २९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
Tuesday, 08.14.2018, 01:03pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको चर्चा चलिरहेका बेला स्वदेश तथा विदेशबाट अध्ययन गरेर आएकाहरुमध्ये झण्डै दुई तिहाईले चिकित्सा सेवा अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन् ।
शनिबार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) र बिडीएसमा परीक्षामा २४.४ प्रतिशत मात्र उतीर्ण भए भने बिडीएसमा ५७ प्रतिशत उतीर्ण भएका छन् । दुबै गरी जम्मा २९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । काउन्सिलका अनुसार सात ७६ जना एमबीबीएस पास गरेका चिकित्सकहरुले दिएको लाइसेन्स परीक्षामा जम्मा १८९ जनामात्र पास भएका छन् ।
बाहिरबाट हेर्दा यो नजिता नराम्रो देखिए पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी भने यसलाई नराम्रो भन्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार हेर्दा धेरे विद्यार्थी फेल भएको देखिए पनि वर्षभरीको नतिजालाई आधार मान्दा नेपालमा वाषिर्क ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकै देखिन्छ । जुन आफैमा नराम्रो नतिजा हैन । यद्यपि, यस पटक सामेल भएका अधिकांश विद्यार्थी पुराना व्याचको (छ वर्ष अगाडि देखिएकोे) भएकोले पनि नतिजा राम्रो नआएको हुनसक्ने काउन्सिलले जनाएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मार्च, अगष्ट र डिसेम्बर गरी वर्षमा तीन पटक चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिने गर्दछ । जसमध्य डिसेम्बरमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले उक्त परीक्षामा सामेल हुने गर्दछ ।
प्रवक्ता डा. अधिकारीको भनाई अनुसार यस पटक सामेल भएका विद्यार्थीमध्य करिब चार सयदेखि पाच सय विद्यार्थी पुराना व्याच (छ वर्ष अघिको) भएकोले पनि हुनसक्छ, यति कमजोर नतिजा आएको सम्भवत यो नै पहिलो हो । यद्यपि, यसकै भरमा पढाइको गुणस्तर नै घट्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
विशेष गरी, विद्यार्थीको संख्या, पढाइको स्तर तथा विद्यार्थीको क्षमताले पनि नतिजामा असर पार्ने हुँदा प्रतिशतका हिसाबले पनि यस पटकको नतिजा अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
काउन्सिलले यस भन्दा अगाडि ०७४ साल मंसिर १६ गते लिएको परीक्षामा जम्मा ३९ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका थिए । जुन यसभन्दा अगाडिको सबैभन्दा कमजोर नतिजा हो । यस्तै, काउन्सिलले शनिवार लिएको बीडीएस तर्फको परीक्षामा भने ५७।५ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । जम्मा १२७ जना परीक्षार्थी सामेल उक्त परीक्षामा ७३ जना (५७.४८प्रतिशत) जना पास भएको काउन्सिलले जनाएको छ । यो नतिजासँगै काउन्सिलले आइतबार लिएको दुवै परीक्षामा पास हुनेको संख्या जम्मा २९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।